Madaxweyne Biixi Waxa la Gudboon Inuu Kala Doorto Raaligelinta Rodol Iyo Badbaadinta Aviationka S/land. | Marsa News
Madaxweyne Biixi Waxa la Gudboon Inuu Kala Doorto Raaligelinta Rodol Iyo Badbaadinta Aviationka S/land.
March 23, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Markii uu talada dalka qabtay Madaxweyne Muuse, waxa uu hay`ada cusub ee Duulista Hawada iyo Madaarada Somaliland u magacaabay Cabdi Maxamed Rodol oo ka mid ahaa dhalinyaradii lagu asaasay, isla markaana tiir dhexaadka u noqday shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines ilaa uu ka gaadhay Chief Pilot.
Magacaabista Rodol oo dadka qaar yidhaahdaan waxa ay ku timid saaxiibtinimo ka dhaxaysay labada oday ilaa wakhtigii dawladii Siyaad Barre, halka dad kalena ay aaminsan yihiin inay ku timid abaal shakhsi ah oo la xidhiidha halgankii uu Muuse ku doonayey inuu ku hanto Gudoomiyenimada Xisbiga Kulmiye.
Si kastaba ha ahaatee, anigu shakhsiyan, waxaan ka mid ahaa dadka sida weyn ugu farxay magacaabida Chiefka, aniga oo filayey inuu wax badan ku soo kordhin doono Aviationka Somaliland maadaama uu khibrad iyo waayo aragnimo dheer u leeyahay hawlaha duulimaadyada madaniga ah. Hase yeeshee, waxay u eeg tahay in filashadaas lagu hungoobay!
Waxtar, wanaajin iyo waxqabad ha joogee, Maareeyuhu waxa uu afka ooda ka saaray waaxdii xidhiidhka bulshada iyo warbaahinta (Media and Communication) u qaabilsanayd wasaarada/hayada.
Taasina waxay sababtay inaan maanta hay`adu lahayn cid iyo meel gudbisa fariinteeda, Marar dhawr ah Maareeyaha laftiisa ayaa isku kalifay inuu saxaafada wax u sheego, hase yeeshee hadal macno leh oo masuul kuma hadlin, manuu ogolaan in su`aalo la weydiiyo.
Waxa ugu dambaysay dhacdadii todobaadkan iyo muranka ka soo cusboonaaday maamulka hawada sare ee Somaliland iyo Somaliya oo haba yaraatee Maareeyuhu aanu shirkiisii jaraa`id wax ka duwan hadalka dadka suuqa jooga aanu ku hadlin.
Maareeyuhu waxa uu cabudhin, hanjabaad, iyo amar ku taaglayn ku bilaabay ilaa hadana ku hayaa shaqaalaha hay`ada uu maamulo.
Dhamaan shaqaaluhu waxa ay noqdeen kuwo niyad jabsan oo aan haba yaraatee ku niyad samayn habkan uu Maareeyuhu wax u wado, Waxa la yaab leh in aan Maareeyaha albaabka xafiiskiisa cidi furin una galin marka uu soo fadhiisto ilaa inta uu ka baxayo.
Wax kale kuma garatide shaqaaluhu waxa ay ku jiraan “xabsi xafiiseed” uu Maareeyuhu galiyey, Intaa waxa dheer, xog ogaal la`aan aanuu Maareeyuhu hoos uga war hayn madaarka kaliya ee dalka oo dhan ka shaqeeya; Hargeisa Airport.
Ma jiro xidhiidh wada shaqayneed oo uu Maareeyuhu la leeyahay Wasaarada Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somaliland oo ah Wasaarada guud ahaanba maamusha gaadiidka oo ay diyaaraduhuna ku jiraan.
Sidoo kale, ma jirto wada shaqayn ka dhaxaysa Maareeyaha iyo Wasaarada Arimaha Dibeda madaama hawlo badan oo heer caalami ah ay haayadu ku khasban tahay inay u sii marto Wasaarada Arimaha Dibeda.
Bishii Oktoober 2019-kii, Mareeyuhu waxa uu shaqada ka eryey inta badan shaqaalihii macluumad bixinta iyo hagida diyaaradaha Air Navigation Serviceka (ANS) ee madaarka Hargeisa.
Saqaalahaas oo tacab, kharash iyo wakhti badani ku baxay tababaridooda, waxa abaal la`aan kula wareegtay Puntland ka dib markii ay halkaa u shaqo doonteen.
Taasi waxay curyaamisay hawlihii iyo adeegii madaarka Hargeisa ee la xidhiidhay hagida diyaaradaha. Waa sababta keentay inay shirkada diyaaradaha ee flydubai ku cabatay in information khalad ah uu siiyey Towerka Madaarka Hargeisa.
Haa’yada Duulista iyo Madaarada Jamhuuriyada Somaliland waxa horyaala hawlo waaweyn oo u baahan in si aqoon iyo waayo aragnimoba ku jirto loo maareeyo loona waajaho.
Sida hada cadaatayna Maareeye Rodol maaha masuulkii ku haboonaa inuu maamulo haay’ada, Ma muuqato guul iyo horumar uu gaadhsiin karo oo ku dhawaad saddexdaa sanno ee uu xilka hayey ayaa la arki lahaa.
Lugooyada iyo hagardaamada u Maareeyuhu ku hayo haay’ada duulistu waa mid aan la sii eegan karin.